Xidhiidhka Ruushka iyo Somalia maxuu ku soo kordhinayaa mandaqada Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe? | Gabiley News Online
Dagaalkii qabooba (the cold war) markuu dhamaday, dalka Maraykanku waxuu noqday awooda kaliya ee calamka ka jirta (Only Super power). Dhaqaalaha Maraykanku waxuu noqday dalka ugu dhaqaalaha wayn calamka, lacagta dollarka ee Maraykanku waxay noqotay lacagta caalamka oo dhan wax ku kala iibsadan.
Haddaba, ma jiro dal/dalal kale oo Maraykanka la tartami kara, xaga ciidan iyo xaga dhaqaalahaba. Lakiin iminka waxaa soo baxay in ay dalalka Ruushka, Shiinaha (China), iyo European Union ay ka soo horjeedsana hab dhaqanka Maraykanka.
Shiinahu (China) waxuu noqday dalka labaad ee calamka ugu dhaqaalaha badan. Dalka Ruushka oo mudo suuxsana (coma) ku jirana, waxaa si cad uga soo horjeedsaday awoodaha ciidan ee dalka Maraykanka iyo xulafadiisu ka wadan bariga dhexe.
Sida daradeed, waxaa mar labad bilaabmay dagaal qabooba (cold war) oo calamku u kala qaybiyay laba garab. Garab uu Maraykanku hogaaminayo, oo ay ka mid yihiin dalalka khaliijku, iyo garab kale oo uu Ruushka iyo Shiinahu (China) hogaaminayo, oo Iiran ka mid tahay.
Haddaba, Bariga dhexe waxuu noqdeen goobaha xurgufdani ka bilaabmatay, kana sii soconayso. Iminkana waxay u soo gudubtay Geeska Afrika iyo bada cas.
Haddaba, shirka qaramada midoobay waxa ku kulmay Raysal wasaaraha Ruushka iyo Wasiirka arimaha dibada ee dawlada magac u yaalka ah ee Somalia. Waxaa ay ku heshiiyeen in ay soo ceshadan xidhiidhkii ka dhexan jiray.
Haddaba, samayn ma inagu yeelan kartaa xidhiidhka Somalia iyo Ruushka ?
1) In aynu ka faa’iidno heshiiskood. Sida aynu uga faa’iidnay khilafka khaliijka, markii aynu tageernay isbahaysiga Sacuudigu hogaaminayo, Somaliyana meel dhexe iska tageen. Waa haddii ay xulafada Maraykanku iyo khaliijku hogaaminaya ay ina cawiyan. Ama
2) In aynu dhibaato inooga timaado heshiiskooda. Haddii Ruushka iyo xulafadiisu ay Somalia kula heshiiyan in ay ka cawiyan xaga military iyo dhaqaale. Somalia saldhigyo military kaga badalato. Dawlada Somalia ee daciifka ahi, ee musuq masaqu hadheeyay ma diidi karto qorshaha ay wataan xulafada Ruushku.
Dalka Ruushku in muda ahba wuxuu waday sidii uu u joojin lahaa awooda ciidan ee uu Maraykanku isku balaadhinayo bariga dhexe. Dalka Maraykanu waxa uu doonayay inuu dawlada Siiriya ka tuuro xukunka, siduu ka yeelay dawladii Sadam Xuseen ee Ciraaq iyo Talabanka ee Afganistan . Ruushku wuxuu hakiyay awooda ciidan ee Maraykanka, markii dalalka Ruushku, Iiran, Turki iyo Asadka Siiriya ay jabiyeen dawldadii Daacish iyo xulafada Maraykanku hubeeyay.
Haddaba, guusha Ruushka iyo xulafadiisu ka soo hooyeen Siiriya, waxay siisay Ruushka kalsooni cusub oo ay ugu hanqal taagan in ay ku joojiyan awooda ciidan ee Maraykanka iyo xulafadiisa khaliijku ka wadan dalka Yeman.
Haddaba, iyaga oo xulafadani uu Ruushku hogaaminayo mar marsiiyo ka dhiganaya in ay joojinaya xasuuqa iyo macluusha ka socota dalka Yeman, ayaa waxay raba in ay saldhigyada military ka helan Somalia/Somaliland. Saldhigani ooy doonaya in ay kagana duulan dalka Yeman.
Dalka Ruushku waxaa uu doonaya inuu marinka Suez-ka oo ah marinda bada ee ugu mihiimsan calamka inuu fadhiisimo ka helo, si isaga iyo xulafadiisu ay awooda dhaqaale iyo ciidanba uga faa’iidaystan. Labada saldhig ee uu dawlada Somalia waydiisanayaa waxay noqonayaan saldhig Bada carabta ku yaala (ama Boosaaso) iyo mid Bada Cas ku yaal oo (Berbera/Saylac) ah.
Somaliland ma ah dal la Ictiraaf haysta, calamkuna waxuu Ictiraafsan yahay dawlada Somalia ee tagta darin in ay Somalia (ooy Somaliland) ku jirto ka mid tahay. Ruushku, isaga oo taasi ka faa’iidaysanaya ayuu ogalaansho saldhiga Berbera/Saylac ka soo qadanaya dawlada Somalia.
Dawlada Ruushku way og yihiin in ayna dawlada Somalia ka talin Somaliland (ama Berbera iyo Saylac), lakiin marka ay ogalaansho saldhigyadani helan, ayay Rushku wafdi u soo diri doona Somaliland.
Waxuu Ruushku Somaliland siin doona ‘ultimatum’, ama labada mid in ay kala doorano:
1) In ay saldhig military ay dawlda Somaliland u ogalaato.
2) Haddii Somaliland diido, waxay u sheegayaan in ay dawlada Somaliland khakhal siyaasadeed iyo nabadgalyo ay galin doonan.
Dalka Ruushku ma ah dal sida dalalka reer galbeedka, siyaasad iyo is qancin ka fakira. Madaxwaynaha Ruushku (Mr Putin), isaga oo guusha uu ka gadhay Siiriya ku xusaabtamaya, ayuu ku soo dhiiranaya inuu qabsado Geeska Afrika iyo Gacanka Cadmeed. Ujeeda uu ka leeyahay waa sida awoodisa ciidan ugu fidiyo degankani, isla markana uu dawlada Galbeedka ee uu Maraykanu hogaaminayo u tuso in ayna dhiman awoodii ciidan ee Ruushku.
Marka, haddii ay Somaliland ogalaato in ay saldhig Military siiyan Ruushka. Ruushku waxuu Somaliland ka tageeri doona xag dhaqale iyo ciidanba. Geeska Afrikana waxuu noqon doona, meesha ay ka burburiyan awooda khaliijka. Iyaga oo hubeeynaya xogaga xuutiyiinta ee Yeman ka dagalamaya. Dagaalkasina waxaa gadhi doona dalalka khaliijka oo dhan.
Haddii Somaliland diido codsiga Ruushka, waxaa isku dayi doona, in ay hub iyo saanad siiyan Puntland iyo mucaaridka Somaliland ka soo horjeeda. Tani waxay nabad galyada Somaliland iyo Geeskaba galin doonta khal khal.
Somaliland waxaa mar kasta faa’iido ugu jirtaa in ay xulafada Sacuudiga iyo Maraykanku hogaaminaya ay la safato. Lakiin, Somaliland waa in ay kooxdani hor dhigto khatarta Somaliland, Geeska Afrika iyo dawladaha khaliijka wajahayaan, haddii aan la tageerin Somaliland.
Marka, xulafada Sacuudigu hogaaaminayo waa in ay:
1) Ictiraafka Somaliland, si ayna loo joojiyo sheegashada Somalia ay sheeganayso iyo khidadaha Ruushku wato. Iyo
2) In dhaqaalo Somaliland laga cawiyo, si cadawga Somaliland uga faa’iidaysan bahida dadka Somaliland.
Marka, xukuumada Somaliland waa in ay fadhigan ka kacado, siyaasada Marfishka ma shaqaynaso.
Somaliland waa in ay u cadayso dalalka Carabta in Somaliland xidhiidh la samaynayso Ruushka, inta ayna Somalia xadhiidhkooda hana qaadin.
Gaba gabadii, waxaa laga yaaba, in dalalka khalijka iyo xulafadoodu ay arintani ka war hayaan, si deg deg ah uga fal calin doonan. Haddii kale, waa in Somaliland ay arintani dabada ka riixdo. Inta ayna albaabkastaba inga soo xidhmin.
OAKLAND, CALIFORNIA o